Sampana Menafify - Tily eto Madagasikara
Ny Sampana Menafify no zokiny indrindra amin’ny salan-taonam-panabeazana Tily (aorian’ny faha-19 taona hatramin’ny fahafenoan’ny faha-25 taona ). Sampana fahaefatra amin’ny fanabeazana Tily eto Madagasikara araka ny tapaka tamin’ny fihaon’ny Filoha tany Ankadikely Ilafy Aogositra 2002 ary nohamafisin’ny Fitsipika Fototra sy Fitsipika Anatiny nivoaka 2007.
Pow wow 1988 tao Sadabe Antananarivo no nitsirian’ny hevitra hananganana ny Sampana Menafify. Fivondronana vitsivitsy no nisantatra nanorina azy io taona io ihany, toy ny tany amin’ny tapany avaratry ny nosy sy teto Antananarivo. Manaja sy manaraka ny lamina iraisan’ny sampana rehetra eo anivon’ny Fivondronana ny Menafify ka eo ambany fiahian’ny Komitim-pivondronana sy ny Tonia.
Antom-pisan’ny Sampana Menafify
“Fandaharana handraisan’ireo tanora anjara tanteraka » no iainana ao amin’ny Menafify.
Fanomanana amin’ny asa fivelomana na fanampim-pivelomana (Formation professionnelle)
Fampivelarana ny fahaiza-mamorona ho enti-manatsara ny fiaramonina (Initiative et créativité)
Firotsahana eo amin’ny famokarana sy fanatsarana ny fiaraha-monina (Insertion sociale)
Rafitra ao amin’ny Sampana Menafify
Zatovolahy aorian’ny faha-19 taona hatramin’ny fahafenoan’ny faha-25 taonany no miara-mifanabe ao amin’ny Sampana Menafify. Tsy voatery ho nandalo fanabeazana skoto ny menafify iray, fa kosa manaiky hanaraka ny fomba fanabeazana skoto eo anivon’ny Sampana Menafify.
Zatovolahy miisa 4 hatramin’ny 8 no miara-miaina sy mifanabe ao anaty Fokonolona Menafify iray.
Anaram-pokonolona : Misafidy anarana « Olomanga » na « Olo-malaza » efa
nodimandry teo amin’ny tanàna iorenany ( na vohitra na Fiangonana) ny Fokonolona ka ny toetra tsara nampiavaka ilay olona no atao tarigetra.
Fokonolona 2 hatramin’ny 4 mitambatra no manome Fileovana Menafify iray.
Anaram-pileovana : Anaran’ilay tanana na vohitra misy ny Fileovana. Ampiana
mpamari-toetra ao aoriana mba hiavahany amin’ny Sampana Mena.
Mpiandraikitra 1 na 2 nofidian’ny Fileovana ka atolotry ny Komitim-pivondronana no mitàna ny andraikitry ny Zokiolona Menafify.
Tovolahy mihoatra ny 21 taona ary mpandray ny fanasan’ny Tompo na mpiomana no afaka fidiana ho Zokiolona.
Ny Zokiolona no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fampandehanana ny Fileovana
Mpitarika tetik’asa ny Loholona ao amin’ny Sampana Menafify.
Ny loholona no tompon’andraikitra voalohany ao anaty Fokonolona
Mety hiovaova araka ny fanatanterahana tetik’asa ny Loholona Menafify.